‘मास्टर’ रिलिजमा हलमा दर्शकको भिड, ५० प्रतिशत अकुपेन्सीको नियम उल्लंघन
चेन्‍नई । लकडाउनपछि हलमा रिलिज भएको प्रमुख भारतीय चलचित्र ‘मास्टर’ बनेको छ । यो आज (बिहीबार) देखि तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम र हिन्दी गरी पाँच भाषामा रिलिज भएको छ । कोरोना महामारीको डरबीच पनि सुप...
चलचित्र निरन्तर प्रदर्शनको आशामा दर्शक
imagekhabar.com . ६ दिन अघि
चलचित्र निरन्तर प्रदर्शनको आशामा दर्शक दिपेन्द्र अधिकारी १ माघ २०७७, बिहीबार २०:३३ दिपेन्द्र अधिकारी (इमेज) काठमाडौं, माघ १ । दश महिनापछि चलचित्रहलमा नयाँ चलचित्र प्रदर्शनमा आएको छ । हल सञ्चाल...
महामारीबीच ‘मास्टर’ को बम्पर ओपनिङ, एकै दिनमा कमायो ४० करोड
काठमाडौं। दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘मास्टर’ले बम्पर सुरुआत गरेको छ। कोरोनाकालमा आजदेखि प्रदर्शनमा आएको यो चलचित्रले पहिलो दिनमै ४० करोड भारतीय रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जना...
५० प्रतिशत अकुपेन्सीमै ‘मास्टर’ ले पहिलो दिनमै गर्‍यो २५ करोडको व्यापार
मुम्बई । अभिनेता विजय सेतुपतिको हालै रिलिज भएको चलचित्र ‘मास्टर’ ले पहिलो दिनमै तमिलनाडु बक्स अफिसमा राम्रो कमाइ गर्न सफल भएको छ । ट्रेड रिपोर्टका अनुसार, चलचित्रले पहिलो दिन नै विन्डो टिकट (हलमा ट...
कोरोनाको बीच दक्षिण भारतीय फिल्को बक्स अफिसमा तुफान, नेपालमा पनि रिलिज
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभरी फिल्म उद्योग लामो समय ठप्प रहे । यही बीचमा रिलिज भएको दक्षिण भारतीय फिल्म मास्टरले बक्स अफिसमा तुफान ल्याएको छ । थलापति विजय र विजय सेतुपतिको फिल्म मास्टरले बक...
साउथ इण्डियन चलचित्र ‘मास्टर’ले गर्‍यो पहिलो दिनमै ४० करोडको व्यापार
deshsanchar.com . ६ दिन अघि
कोरोना महामारीको समयमा पनि साउथ इण्डियन चलचित्रका नायक थलापति विजयी र विजय सेतुपति अभिनित चलचित्र ‘मास्टर’ले विश्वभरमा पहिलो दिनमै ४० करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको व्यापार गरेको छ। चलचित्र रिलिज भएको प...
महामारीबीच भारतीय बक्स अफिसमा ‘सुनामी’ फिल्म ‘मास्टर’को बम्पर ओपनिङ
दक्षिण भारतीय फिल्म ‘मास्टर’ले बम्पर सुरुआत गरेको छ। साउथ सुपरस्टार थलापति विजय र विजय सेतुपति अभिनित फिल्म ‘मास्टर’ बुधबार रिलिज भएको हो । फिल्मले सुरुवाती ब्यवसाय बम्पर गर्न सफल भएको छ । कोरोनाक...
मुम्बई । साउथ सुपरस्टार थलापति विजय र विजय सेतुपति अभिनित फिल्म ‘मास्टर’ बुधबार रिलिज भएको हो । फिल्मले सुरुवाती ब्यवसाय बम्पर गर्न सफल भएको छ । रिपोर्टकाअनुसार एक्सन थ्रिलर फिल्म ‘मास्टर’ले पहिलो ...
‘मनसँग मन’ले लियो रिलिज डेट
काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘मनसँग मन’ले रिलिज डेट तोकेको छ । चलचित्रले नयाँ बर्षको छेको पारेर चैत २७ गतेका लागि रिलिज डेट लक गरेको छ । कैलाश राइको निर्देशन रहेको चलचित्रमा पुष्प खड्का, वर्षा...
makalukhabar.com . ६ दिन अघि
काठमाडौं ।बक्स अफिसमा राम्रो सुरुवात गरेको तमिल सुपरस्टार विजय र विजय सेतुपतीको फिल्म ‘मास्टर’ पाइरेसीको मारमा परेको छ । रिलिजको पहिलो दिन नै ‘तमिल रकर्स्’ ले अनलाइन राखेकाे छ । पाइरेसीमा परेको खबर...
विहीबारबाट चलचित्र हल खुले, दर्शक आउने आशामा हलवाला
चलचित्र ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ मार्फत नेपाली चलचित्र जगतले कोरोना कहर पछि नयाँ चलचित्र पाएको छ । कोभिड १९ का कारण गत चैतबाट फिल्म हल बन्द भएका थिए । गत पुस १० गतेबाट सरकारी अनुमती बिना नै फिल्...